“Isha Baydhaba”: meesha ay ku fadhi diriraan dumarka Soomaalida ee Istanbul | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA “Isha Baydhaba”: meesha ay ku fadhi diriraan dumarka Soomaalida ee Istanbul
Image captionBeerta Isha Baydhaba-halka kulmisa Soomaalida Istanbul
Waxaa sanadihii dambe aad u xoogeystay xiriirka Soomaalida iyo Turkida, waxaana taas ay keentay in Soomaali badan ay deggaan dalka Turkiga, kuwaas oo isugu jira dhallinyaro arday ah, ganacsato iyo siyaasiyin.
Soomaalida oo ah dad meel walba oo ay dunida ka tagaan is urursada ayaa waxa ay Istanbul ka sameysteen xarun ay ula baxeen magac u gaar h, taas oo saldhig u noqotay dadka sheeko iyo shaah doonka ah.
Beerta Mola Gurani ee bartamaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo ah barxad doog cagaaran lagu beray, kuraasna lagu camiray, biyuhuna ay burqanayaan ayaa ah goob kulmisa dadka Soomaalida ee ku nool magaaladaasi.
Goobtaasi oo ay sidoo kale yimaadaan ragga ayaa xilliyada fiidkii waxaa ku badan dumarka Soomaalida oo aan looga baranin goobaha fadhi-ku-diririka.
Waxaa halkaasi isugu yimaada oo ku kulma Soomaalida ugu badan ee ku nool xarunta ganacsiga ee dalka Turkiga, waxaana ay ula baxeen magac u gaar ah “Isha Baydhabo” oo dad badan ay ku yaqaanaan magaalada Baydhaba.
Image captionDumarka soomaalida ayaa xilliyada habeenkii aad u fariista halkan
Waxaan beertaasi booqday xilliyo kala duwan oo waxaan ku arkay Soomaali ka kooban qeybaha bulshada, oo waqtiyada qaarna ay u badan yihiin dumarka. Qaar kamid ah dadka aan halkaa kula kulmay ayaan weydiiyay waxa beerta loogu bixiyay Isha Baydhabo.
“Sababta Isha Baydhabo loogu bixiyay goobtan ayaa ah inay leedahay biyo burqanaya, waxaana magaca uu baxay xilliga guddoomiayaha baarlamaanka [Maxamed] Mursal uu ahaa asafiirka, dadkuna waxay u bixiyeen Ishab Baydhabo maadaama Mursal uu kasoo jeedo magaalada Baydhabo,” ayuu yiri Salaad Cabdile Guure.
Waxa aan wax ka weydiiyay sababta ay Soomaalida beertaasi isugu yimaadaan.
“Sababaha ugu waaweyn ee ay halkan u yimaadana ayaa ah xog wareysi iyo weliba fadhi-ku-diriri,”ayuu raaciyay.
Amiira Cabdullaahi oo kamid ah haweenka ku caweeya Isha Baydhabo ayaa sheegtay inay tahay goob xogta lagu kala qaato.
“Meeshan Isha Baydhabo ayaa la dhahaa, Soomaalida ayaana ula baxday, tahriibayaasha xogta ayay ka helaan, dadk yimaadana halkan ayay ku sheekeystaan,” ayay u sheegtay BBC-da.
Waa arrin naadir ah in deegaannada Soomaalida gaar ahaan xilliyada fiidka ah lagu arko dumar koox koox u fadhiya oo shekeysanaya, balse dadka ugu badan ee xilliyada habeenkii “Isha Baydhabo” isugu yimaada ayaa ah dumar Soomaali ah, kuwaas oo fadhi-ku-dirir ka sameysta beerta.
“Waxaan halkan u imid in aan ku caweeyo aniga iyo asxaabteyda oo ana ku shekeysano, wakhtina ku qaadano. Halkanna way ka duwan tahay Soomaaliya oo meesha aad rabto aadan aadi karin,” ayay tiri Amiira Cabdullaahi.
Waxay intaas ku dartay in magaalada Istanbul dumarka Soomaalid ay ku dareemaan xorriyad oo xilliga ay rabaan ay soo daneysan karaan, arrintaas oo ay sheegtay inay adag tahay in Soomaaliya ama deegaannada Soomaalida lagu arko.
“Dhaqanka wuu isbadelay oo hooyooyinka Soomaalida marka gabadha ay rabto inay baxdo way canaantaan oo waxay yirahdaan ha bixin iyo wax lamid ah balse halkan way ka duwan tahay,” ayay Amiira raacisay.
Goobtan ayay dadku ku sheegeen in biyaha burqanaya ay uga egtahay isha Baydhaba, balse biyaha halkan ka burqanaya waa kuwa lagu qurxiyay oo aan dabiici ahayn sida kuwa Isha Baydhabo.
Waxaa muqata in Beerta Mola Gurani ay xudun u noqotay qofwalba oo Soomaali ah oo tega Magaalada Istanbul.
Previous articleSheekh Soomow “Dalka Waxaa Yimid Wahaabiyo Oo Ay Soo Maalgeliyeen Dalal Shisheeye”+Daawo Vedio
Next articleMaamulka G/Banaadir oo dhaqaale badan ka sameenaya Lo’da magaalada laga aruuriyo
(Sawirro) Stadium Muqdisho oo roog cagaaran la dhigayo & Wasiirad Khadiija oo u digtay..
XOG: Xasan Sheekh oo Kala Jibinaya Nabad iyo Nolol (Farmaajo oo Shaqsiyaad caan ah lagala wareegayo)
WAREYSI KULUL: BBC-da Oo Soo Bandhigtay Xogaha Udambeeyey Kismaayo
Booliska Muqdisho oo xalay dil iyo xarig u geystay askar dhac geysaneysay
Shabaab oo soo bandhigay askar ay sheegeen inay ku qabteen dagaalkii Baar-sanguuni..
DAAWO: maxaa ka qaldanaa falkii Axmed Cali Daahir? Kadib Markii uu uhanjabay Gaari dameerlihii
DHAGEYSO:Aqoonyahan Caalim “Farmaajo Wuxuu Caalamka u Muujiyey In Kenya Saxan Tahay”
XOG:Xildhibaanada ugu caansan barlamaanka uguna quruxda badan oo isaga carartay Muqdisho kadib labo arin
Xildhibaan Nuur Xaashi “In madaxweynaha uu ciidamo noo adeegsado, waa ku tumasho dastuur”